Izinyoni zokuthula zihlaza uMengameli wase-Nigeria ngokwala ukundiza | Scrolla Izindaba
Izinyoni zokuthula zihlaza uMengameli wase-Nigeria ngokwala ukundiza
Amajuba amhlophe adale isimo esiphoxa kakhulu e-Abuja ngoLwesihlanu ngesikhathi enqaba ukundiza ngemuva kokudedelwa nguMengameli wase-Nigeria, uMnu uMuhammadu Buhari.
I-Premium Times ibike ukuthi uMengameli ubesendaweni yokuhlonipha amalungu Amabutho Ahlomile abulawa empini.
Izinkundla zokuxhumana ziye zagxila ekucabangeni ukuthi ukwenqaba kwezinyoni ukundiza kungenxa yokungabi nabulungiswa nokungavikeleki ezweni.
Umengameli wavula ikheji elihlala amajuba ukuze akwazi ukundiza kodwa izinyoni zenqaba.
Ngomzamo wokuhlenga lesi simo, uMengameli wakhetha eyodwa wayiphonsa emoyeni kodwa yabuyela emuva esibayeni futhi yenqaba ukundiza.
Izinyoni zindizele emoyeni kuphela ngemuva kokuba uMengameli abuyele esihlalweni sakhe.
Leli siko lenziwa minyaka yonke ukukhumbula impilo yamalungu angasekho embutho yezempi. Kuwuphawu lokuthula.
Udokotela wezilwane, uJarumi Barnabas, uchaze ukuthi izinyoni ezindizayo azihlale zilangazelela ukundiza ngokushesha ngemuva kokudedelwa lapho ezivalelwe khona isikhathi eside. UBarnabas uthe kunemiphumela ethile yengqondo ehambisana nokunyakazisa izinyoni ukusuka kwenye indawo ziye kwenye.
“Lawo majuba ajwayele ukuqeqeshwa evela emagatsheni ehlukene, ukuwahlanganisa ndawonye kuzodala uhlobo oluthile lomthelela wengqondo kuwo ngamunye wawo,” kusho udokotela.
I-Premium Times ibike ukuthi amajuba akhishwa nguMengameli ngowezi-2019 nawo enqaba ukundiza ngokushesha ngenkathi ededelwa. Ngesikhathi soSuku Lokukhunjulwa Kwamasosha Ahlomile ngowezi-2014, amajuba akhishwa ngowayenguMengameli uGoodluck Jonathan nawo enqaba ukundiza.